मेरो मुख्य प्राथमिकता घोराहीलाई पाँच नम्वर प्रदेशको राजधानी बनाउने नै हो « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
मेरो मुख्य प्राथमिकता घोराहीलाई पाँच नम्वर प्रदेशको राजधानी बनाउने नै हो
७ असार २०७४, बुधबार ०४:०८ मा प्रकाशित
नेपाली काग्रेसका तर्फबाट घोराही उपमहानगरपालिका मेयर पदका उम्मेदवार भुपबहादुर डाँगीसंग सैघाली खबर डट कमका लागि पत्रकार पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ःसम्पादक
घोराही उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो । मेरो व्यक्तिगत चाहना भन्दा पनि सिंगो नेपाली कांग्रेस र आम मतदाताको चाहना अनुरुप मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ । मेरो उम्मेदवारीबाट आम मतदाता उत्साहित भएका छन् । जनताको सेवा गर्ने मेरो प्रमुख उद्देश्य हो । घोराही उपमहानगरपालिकाका जनताले अहिले सस्तो लोकप्रियताको नारा नभएर काम खोजेका छन् । म गफ भन्दा कामलाई बढी विश्वास गर्छु । अहिले यो गर्छु वा यस्तो बनाउँछु भनेर जनतालाई झुटो आश्वासन दिन चाँहदैन । म जे बोल्छु त्यो गर्छु । गर्न नसक्ने चिजलाई म बोल्दैन ।
यस क्षेत्रको विकासका लागि तपाई संग कस्ता योजना छन् ?
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणपत्रमा स्पष्ट रुपमा विकासको खाका कोरिसकेको छ । मेरो मुख्य प्राथमिकता भनेको घोराहीलाई पाँच नम्वर प्रदेशको राजधानी बनाउने नै हो । यो अहिलेको सबैभन्दा प्राथमिकताको कुरा हो । त्यसैगरी १९ वटै वडालाई समट्ने गरी चक्रपथ निर्माण गरिने छ । सबै जसो ग्रामीण सडकहरुको कालोपत्रे गरिने छ । उपमहानगरपालिका भित्रका सबै खहरे खोलाहरुमा ड्याम बाँधेर जलाशय निर्माण गरिने छ । दाङ पर्यटनको हव बनाउन लुम्विनि र स्वर्गद्धावारीलाई जोड्न विशेष पहल थालिने छ । घोराहीमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरु धारपानी, बाह्र कुने दह, लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्दैै पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरिने छ । रिहार–होलेरी सडक निर्माणमा पहल गरिने छ । दाङ–प्यूठान सडकको कालोपत्रे गरिने छ । घोराहीका सबै वडामा कम्तिमा पाँच शैयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिने छ । दैवि प्रकोप व्यवस्थापनका लागि उचित पहल गरिने छ ।
तपाई नै किन मेयर पदमा विजयी गराउने ?
मुख्य कुरा मैले जनताका लागि कत्तिको काम गर्न सकेको छु भन्ने नै हो । म कहिले पनि नेता हुँ भन्दै ठूलो भएन । म सधै जनताको साथमा छु । विशेषतः २०४६ साल पछि पार्टीमा म निरन्तर काम गरिरहेको छु । पार्टीले पनि मेरो उचित मूल्यांकन गरेर टिकट दिएको छ । म जनताको कुरा सुन्ने मान्छे । जनताका सबै समस्या मलाई राम्रोसँग थाहा छ । जनताहरुलाई भै परि आउने मुद्दा झैझगडा होस् अथवा प्रशासनमा परेका अप्ठेराको समाधान गर्न म निरन्तर खट्छु । मैले मेरो बारेमा धेरै भन्नु भन्दा पनि जनताले बुझिसक्नुभएको छ ।
म आम मतदातालाई एक पटक मलाई जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने मौका दिनुहोस् भन्न चाहन्छु । मुलुकको विकास र समृद्धिको प्रमुख नेतृत्व कर्ता भनेकै नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट १९ वटै वडाका उम्मेदवार तथा मेयर र उपमेयरलाई अत्यधिक मतका साथ विजयी गराउनुहोस् भन्न चाहन्छु ।